ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အလှပျက်စေတဲ့အဆီကွက်တွေကို ပယ်ဖျက်ပေးမယ့် ကော်ဖီ အစွမ်း…! - MyanmarMagazine
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က အလှပျက်စေတဲ့အဆီကွက်တွေကို ပယ်ဖျက်ပေးမယ့် ကော်ဖီ အစွမ်း…!
ကော်ဖီ ဟာ အဆီကွက်တွေကို ပျောက်ကင်းအောင်လုပ်တာနဲ့ ရေချိုး ဂျယ်လ်စတဲ့ အသားအရေ လှပအောင် လုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေမှာ အလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ ပစ္စည်းတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တဆင့် က လျှောက်သီး၊ လျှောက်ခါးသီး၊ လိမ္မော်သီး ဒါမှ မဟုတ် လာဗင်ဒါလို့ ခေါ်တဲ့ ခရမ်းရောင် အဆင်းရှိတဲ့ Lavender ပန်းဆီတွေနဲ့ ခုနက ကော်ဖီပါတဲ့ အဆီတွေကိုရောသမမွှေရပါမယ်။
အဲဒီလို နောက်ဆုံး ရောစပ်ထားတဲ့အဆီကိုခန္ဓာကိုယ်မှာသုပ်လိမ်းကာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာဆုပ်နယ်ပေးပြီး ပလပ်စတစ်နဲ့ ပတ်ပြီး ဖုံးအုပ်ထားလိုက်ပါ။ ၁၀ မိနစ်လောက်ကြရင်တော့ သုပ်လိမ်းထားတဲ့ အဆီတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။